မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးတော့ မလွယ်သေးဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးတော့ မလွယ်သေးဘူး
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးတော့ မလွယ်သေးဘူး
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Mar 4, 2012 in Myanma News | 27 comments
အရင်တုန်းက cellular ခေတ်၊ပြီးတော့GSM၊ပြီးတော့ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်း အမျိုးမျိုးမရိုးရအောင်
ငှားရမ်းခ ငွေကျပ်ဆယ့်ငါးသိန်းပေးခဲ့ရပြီးပြီ။နောက်တခါ မနှစ်က ငါးသိန်းတန်ဖုန်းတွေ ထပ်ငှားတယ်။
GSM ရောCDMA 450နဲ့ 800Mhzတွေ။ခုလာပြန်ပီ တန်ဖိုးမတိကျသေးတဲ့ တန်ဖိုးနည်းဖုန်း။အရင်တုန်းက
လုပ်သင့်ပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ အမှန်ဆိုရင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ ၊ ၁၅သိန်းကျော်နဲ့ ထုတ်ထားရတဲ့ ဂျီအက်စ်အမ် ပိုင်ရှင်တွေ အတွက် တစ်ချက်မှ ငဲ့မကြည့်တာ အမှန်ပါဘဲ ။
၅သိန်းတန် ဖုန်းတွေချပေးတယ် ။၁၅သိန်းတန်တွေ ဈေးတွေ ဖုတ်ကနဲ ၈သိန်းပတ်ချာလည် ကို ပြုတ်ကျသွားတယ် (အပြင်ဈေး) ။ ဟော မကြာဘူး… ၅သိန်းဖုန်း စီဒီအမ်အေတွေ ကို အင်တာနက် ပေးသုံးတယ် ။ အရင် ၁၅သိန်းတန်ဂျီအက်စ်အမ် တွေ ခဗျာ… သွားရေလေးထိုင်ယိုနေရတယ် ။ အရေးထဲ ၊ ၅သိန်းဖုန်း(ဂျီ) တွေအတွက် ဆာဗာပြင်တာတို့ ဘာတို့ လုပ်ရင် ၊ အရင်ဂျီအက်စ်အမ် တွေ ခဗျာ ၊ လိုင်း (စစ်ကနယ်) တစ်ခုမှ မရှိရှာဘဲ ၊ ဘာမှ ဆက်လို့ မရ ၊ အဝင်မရတဲ့ ဖုန်းလေးကိုင်ရင်း ငုတ်တုတ်မေ့တဲ့ နေ့ တွေက ရှိသေး ။
ခံရတယ်ဆိုတာက အဲဒီတုန်းက infrastructure တွေမပြည့်စုံလို့ ပါတဲ့။
(၅)သိန်းတန်ဖုန်းတွေကျတော့ အဆောက်အအုံပိုင်းမလိုတော့ဘဲနဲ့ စက်ပစ္စည်း
လောက်ဘဲဝယ်ရလို့ ဈေးလျှော့ငှားရမ်းနိုင်တာပါဆိုဘဲဗျာ။ခုလို ပြန်တောင်းဆိုဖို့ 
အင်တာနက် ADSL လိုင်းတွေကိုလည်း ပြန်အပ်ချင်ပါတယ်။ သွင်းထားတဲ့ ငွေ တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းခွဲ အဆုံးတဲ့ဗျာ..။ မတရားသဖြင့် စားထားနေကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေဆီက လည်ပင်းညစ်ပြီး သွားဖြဲ နွားဖြဲ ယူထားရက်ကြပါပေ့ရယ်ဗျာ…။ ငရဲမင်းကြီးကလည်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေကို စောင့်နေမယ်တော့ ထင်ပါရဲ့နော်..။ သံသယာ ငရဲ ဧရိယာပြင်ပသို့ရောက်နေတယ်လား။ ဘယ်ရမလဲဗျို့..။
အေးဗျ ကျုပ်တို့ MPT ADSL လိုင်းလည်းစစချင်းဝယ်တုန်းက 2300။ ၂၃သိန်းလောက်ကျတယ်….
နှိပ်စက်ဖို့ဘဲသိတယ်။ဒီဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်လာတာတော်တော်ကြာပြီ။
မြန်မာ့ ….. ဆက်သွယ်ရေး ……… တဲ့ …
ဘယ်လို စစ်စတန် တွေနဲ့ သွားနေတာပါလိမ့် ……. ။
သေချာတယ် .. ပါးပါးလှီး ရောင်းစားပြီး သူတို့အပေါက်တွေကို ဖြည့်ဖို့အတွက်ကြည့်ပြီး ရှေ့လျောက်နေတဲ့ စစ်စတန်ပဲ … ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအလယ် မြန်မာ လူမျိုးတွေ မျက်နှာ မငယ်ရအောင်တော့ ဒီစစ်စတန် ပြောင်းလဲ သင့်ပါတယ်ဗျာ .. ။
ကျုပ်က..ဂျပန်၊တိုကျိုမှာ လက်ကိုင်ဖုံးစကိုင်တော့.. ၁၉၉၃ခုနှစ်လောက်…
လစဉ်ကြေး တလ.. ယန်း ၁သောင်း၂ထောင်.. ဒေါ်လှ၁ရာလောက်…
တော်တော်အသုံးလျှော့တာတောင်.. တလ.. ယန်း၁သောင်းဝန်းကျင်.. ဒေါ်လှ ၉၀လောက်…။
သူကြီးရဲ့ အမှတ်တရက ကျနော်တို့ 
ပြောလိုတာကို အဓိပါယ်ကောက်တာ လွဲနေပါပြီ..။
– Total $4.396 trillion (4th)
– Total $81.553 billion (76th)
မဟုတ်ဘူးလေ သူကြီးရ။ဘယ်နှယ့် ဗျာ အနိစ္စ၊ဒုက္ခတုန်း……
ဒီလိုလေ သူကြီးက ၁၉၉၃လောက်မှာ ဂျပန်မှာ ဆိုတော့
ရောက် သူကြီးဦးခိုင်ဘဝကို သွားရည်ကျအားကျမိပါတယ်
သဂျီးတို့များ … ကြွားထှာ အေ. …
ဘက်ဘယ်လု ဂျိဒိုင်းကို မှီလိုက်သူများ ဆိုတော့ ကြွားနိုင်မပေါ့ …
ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းကိုခေါ်တာမှာလဲ ရန်ကုန်ကိုခေါ်ဆိုတာနဲ့ ၊နယ်မြို့ ခေါ်ဆိုတာ
နံ့ ဈေးက(၂)ဆလောက်ကွာတယ်လို့ ပြောတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲကျနော်လဲ မသိဘူး။
ကျနော်အထင် ဟိုဂြိုဟ်တု၊ဒီဂြိုဟ်တု ပတ်နေရလို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ဆက်သွယ်ရေးက MPT ADSL တပ်ထား အင်တာနက်လိုင်းကလုးံလုးံကိုသုးံမရ။လစဉ်ကြေးတော.ပုံမှန်
လာတယ်။ဒါအပြင်ထိန်းသိမ်းစောင်.ရှောင်ခ ၅သောင်းလဲသွင်းရသေးတယ်။ ။ လိုင်းပျက်လို. MPT ADSL က၀န်ထမ်းခေါ်ရင်လဲမုန်.ဖိုး ၁သောင်းလောက်ပေးရတယ်။ အခုတောင်.လိုင်းလုးံဝပိတ်လိုက်ရပီ။ နယ်ကMPT ADSL တွေတော်တော်သနားဖို.ကောင်းတယ်။ ဘယ်တော. မှMPTADSL မတပ်ပါနဲ.။
အမှန်က ၁၅ သိန်းပေးကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေဆိုတာ
အန်ကယ်ကြီး ရေ share holder တွေဆိုတဲ့စကားခိုက်တယ်ဗျာ။ အမြတ်တွေပါထပ်တောင်း ကြရအောင်။ :-)
ကြုံတုံးလေး ဆက်ပြောချင်တာက elite တို့လိုသာ အခွင့်အရေးရရင် ကျွန်တော်လဲ company တစ်ခုလောက်ထောင်ချင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
It is right to sue the Myanmar Telecommunication because our Mobile phones are rent from it.
အမှန်တကယ်ကလွှတ်တော်ထဲက အမတ်တွေက (၁၅)သ်ိန်းဖုန်းကိစ္စကိုပြောသင့်တာကြာနေပါပြီ။
သူတို့မလဲ ဒီ ၅၀၀၀ တန်နဲ့ သူတို့အာဏာရရေးနဲ့ ပြည်သူ့ကိုလှည့်ကိုမကြည့်တာပါ။
မှန်တယ်ဗျာ ဦးသိန်းစိန်ပြည်သူကိုဘာလုပ်ပေးမလဲ ။ကျုပ်တို့ ၁၅ သန်းဂျီအက်(စ)အမ်တွေကို မရရင်
အပ်မယ် အပ်မယ်။ ဒို့လည်း လိုက်မယ်ချန်မထားနဲ့…
Student ရယ်၊အန်ကယ်ကြီး၊Lwin Aung၊ငှက်ကလေး၊JUDGEMENT
အားလုံးသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျနော်တို့ အများပြည်သူ နစ်နာ
ချက်တွေကို စဉ်းစားပေးဖို့ ကောင်းနေပီဗျာ။
ဆက်သွယ်ေ၇းတင်မကဘူး အားလုံးမကောင်းတာ စစ်အာဏာ၇ှင်၇ဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကအ၇ိုးစွဲနေပြီ အမေစုမဲအောင်အောင်သာမဲပေးကြပါလို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်……. အဝေးေ၇ာက်သူ
ယခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ Celebrity အဖြစ်ဆုံးဆုကို MPT ခေါ် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ရရှိသွားပါတယ် ခင်ဗျား…..
အစိုးရအနေနဲ့ အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့သူတွေ ကိုပြန်ပြီးမစဉ်းစားပေးတာတော့လုံးဝကိုမကောင်းပါဘူး။ လုပ်သင့်ပါတယ်။ တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ ၁၅ သိန်းလဲပေးထားရသေးတယ်။ အခွင့်အရေးတွေက လဲအတူတူ ဆိုတော့ မခက်ပါလား။ အစိုးရအနေနဲ့ ပြန်အပ်တာကို လက်ခံရမယ်။ သွင်းထားတဲ့ငွေကိုပြန်ထုပ်ပေးရမယ်။ ဒါမှတရားမယ်။
(unclegyi1974 ပြောတာသိပ်ကြိုက်တယ်။ ရှယ်ရာပိုင်ရှင်တွေလို့ပြောတာကို။)
အဲဒါပြောတာပေါ့ ရှိပူရသေး မရှိအေးဆို တာ သိပ်မှန်တာပဲ..
ဟောကြည့် ကျွန်တော့်ဖြင့် ဘာမှ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့ ဘာဆုံးရှုံးမှုမှမရှိ အေးရော ဟေဟေဟေဟေ
ဂီဂီတို့ချစ်ချစ်ကြီး.. အပ်ပဲလ်ကတော့.. သူ့ပစ္စည်းဈေးကြီးကြီးနဲ့ထုတ်…
နောက်ပိုင်းဈေးလျှော့ရင်.. ရှေ့ကဈေးကြီးမိထားသူတွေ.. ပြန်အမ်းပေးတာလုပ်ဖူးတယ်…
ဖုန်းစာချုပ်ရဲ့ အပိုဒ် ၁၀ မှာ ဒီလိုရေးထားတယ်…တဲ့။
“ ဌာနမှ လက်ရှိပြဌာန်းထားသည့် နည်းဥပဒေများကို ငှားရမ်းသုံးစွဲသူက လိုက်နာရမည် ။ ငှားရမ်းသုံးစွဲသူ တယ်လီဖုန်းကို ပြန်အပ်နှံလိုလျှင်သော်လည်းကောင်း ၊ ဌာနက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ငှားရမ်းသုံးစွဲသူ၏ မိုဘိုင်းအသုံးပြုခွင့်ကို ရပ်စဲလိုလျှင်သော်လည်းကောင်း ဤပဋိဥာဉ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲနိုင်သည် ။
ဤပဋိဥာဉ်စာချုပ်ရပ်စဲသည့် ဘသာဝအလျှောက် ဟောင်းနွမ်းယိုယွင်းခြင်းမှ တပါး ထုတ်ယူသွားစဉ်က အခြေအနေအတိုင်း မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကိရိယာများကို ငှားရမ်းအသုံးပြုသူက ဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရပါမည် ။ ငှားရမ်းအသုံးပြုသူအနေနှင့် လျော်ကြေးတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေ ၊ ဌားရမ်းခ ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်ဖြစ်စေ ၊ တောင်းခံပိုင်ခွင့်မရှိပါ ”
အဲဒါပေါ့ ဖုန်းအတွက်ပေးသွင်းငွေ ပြန်တောင်းဖို့ ဘဲသိဒယ်။
စာရွက်၊စာတမ်းလေး ပြန်ဖတ်ကြပါလို့ …နော်။